Chemical Nemishonga - Xuzhou Xinqihang Plastic Industry Co., Ltd.
Zvinowanzozivikanwa kuti mapaipi uye zvigadzirwa mune thermoplastic zvinhu zvinoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri uko kuendesa zvinwiwa zvine simba uye magasi zvinoda zvemhando yepamusoro zvekuvaka, zvine yakanakisa ngura kuramba. Stainless simbi, yakavharwa simbi, girazi uye zvedongo zvinhu zvinowanzo kuve zvinobatsira zvinotsiviwa nethermoplastic zvinhu, kuona kuchengetedzeka, kuvimbika uye hupfumi mabhenefiti pasi peanoshanda mamiriro.
Kemikari Kurwisa pane Thermoplastics & Elastomers
1. Kuzvimba kwepolymer kunoitika asi iyo polymer inodzokera kumamiriro ayo ekutanga kana kemikari yabviswa. Nekudaro, kana iyo polymer iine chinhu chinobatanidza icho chinonyungudika mumakemikari, zvivakwa zvepolymer zvinogona kuchinjwa nekuda kwekubviswa kwechinhu ichi uye kemikari pachayo inosvibiswa.
2. Iyo basin resin kana polymer mamorekuru anoshandurwa nekuyambuka, oxidation, kutsiva kugadzirisa kana cheni scission. Mumamiriro ezvinhu aya polymer haigone kudzoserwa nekubviswa kwemakemikari. Mienzaniso yerudzi urwu rwekurwiswa kwePV ndeye aqua regia pa20 ° C uye yakanyorova chlorine gasi.
Zvinhu Zvinokanganisa Kemikari Kuramba
Zvimwe zvinhu zvinogona kukanganisa chiyero uye mhando yekurwisa kwemakemikari kunogona kuitika. Izvi ndeizvi:
• Kusungwa. Kazhinji, mwero wekurwiswa unowedzera nekusungwa, asi muzviitiko zvakawanda pane chikumbaridzo chezasi pazasi pekuti hapana chakakosha chemakemikari chinoonekwa.
• Kupisa:Sezvazviri nemaitiro ese, chiyero chekurwisa chinowedzera sekushisa kuchikwira. Zvekare, pachikumbaridzo tembiricha inogona kuvapo.
• Nguva yeKubata: Muzviitiko zvakawanda mitengo yekurwisa inononoka uye ine kukosha chete nekusangana kwakasimba.
• Kushungurudzika: Mamwe mapolymers ari pasi pekushushikana anogona kuita yakakwira mwero yekurwiswa. Muzhinji PVC inoonekwa seisina hanya ne "kushushikana nekuora".
Chemical Resistance Ruzivo